गर्भ-वती महिलाले भूलेर पनि यस्ता काम नगर्नुहाेला, नत्र बच्चा खेर जान सक्छ ! « गोर्खाली खबर डटकम
गर्भ-वती महिलाले भूलेर पनि यस्ता काम नगर्नुहाेला, नत्र बच्चा खेर जान सक्छ !
२०७८ मङ्सिर ७ गते मङ्गलवार प्रकाशित
गर्भ-वती महिलाले भूलेर पनि यस्ता काम नगर्नुहाेला, नत्र बच्चा खेर जान सक्छ ! आफू आमाबाबु भएको र आफूसँग स्वस्थ शिशु खेलेको हेर्ने रहर हरेक विवाहित जोडीको हुन्छ तर, गर्भ तु-हिने अथवा खेर जाने समस्याले धेरैको यो सपना तुहाउन सक्छ । अहिले नेपालमा १५ देखि २० प्रतिशत महिलाको गर्भ खेर जाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
सामान्यतया गर्भ रहेको २०औं हप्ताभन्दा अगाडि मिसक्यारेज अथवा गर्भ खेर जान सक्छ । पहिलो तीन महिनामा विभिन्न कारणले हरेक महिलाको गर्भ जाने सम्भावना रहन्छ । गर्भधारणको पहिलो चरण अर्थात् पहिलो २० दिनमा महिलाहरुलाई आफू गर्भ-वती भएको थाहा नै हुँदैन । यस समयमा महिलाहरु सजग नहुँदा गर्भ जाने सम्भावना बढी रहन्छ ।
गर्भ खेर जानुका मुख्य कारण:- पहिलो तीन महिनामा भ्रू-णको अवस्था कमजोर र असामान्य भएमा गर्भ खेर जान सक्छ तर दोस्रो तीन महिनामा भने गर्भवती महिलाको आहारविहार र पालनपोषण राम्रो नभएमा नै गर्भ खेर जाने गर्छ । जि-नसम्बन्धी समस्या, सा-लनालको अवस्था, यो.., मा लगातार संक्रमण हुनु, गलत औषधि खानु आदि गर्भ जानुका कारण हुन् ।
प्रथम त्रैमासमा ९० प्रतिशत गर्भ खेर जानुको कारण जि-नसम्बन्धी समस्या हो । धेरै भागदौड गर्नु, खानपिनमा ध्यान नदिनु, शरीर र गर्भ-लाई दबाब पर्ने काम गर्नु, एक बच्चा जन्माइसकेपछि छिटै अर्को गर्भ रहनु आदि गर्भ खेर जानुका कारण हुन् । २० वर्षका महिलाको तुलनामा ४० वर्ष उमेरमा महिलाको गर्भ खेर जाने सम्भावना २० गुणा बढी हुन्छ । अर्थात् उमेर ढल्किँदै गएपछि महिलाको प्र-जनन क्षमतामा ह्रा-स आउँछ र गर्भ खेर जान सक्छ ।
त्यस्तै, पहिला एक पटक गर्भ खेर गइसकेको छ भने महिलाले सही उपचार नपाएको खण्डमा पुनः गर्भ खेर जाने सम्भावना त्यतिकै रहन्छ । मधुमेह, ह-र्निया, उच्च रक्तचाप, थाइरोइड आदि रोगका कारण पनि गर्भ खेर जान सक्छ । र-गत अथवा पेट र पा-ठेघरसम्बन्धी रो-गबाट पीडित महिलाको पनि गर्भ खेर जाने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै, त-नाव बढी लिएमा र शरीरको हार्मोनमा अचानक कमी अथवा विकार आएमा गर्भ खेर जान सक्छ । मद्य-पान, धूम-पान र क्या-फिनको बढी सेवनले पनि गर्भ खेर जाने जोखिम बढाउँछ । त्यस्तै, वंशाणुगत समस्याका कारण पनि गर्भ खेर जान सक्छ ।
गर्भ खेर जाने समस्याबाट बच्ने तरिका:- यदि गर्भ खेर जाने शंका भएमा पा-ठेघरको मु-ख खुला छ कि बन्द छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । डाक्टरले ग-र्भा-शयको परीक्षण र आकारको मापन गर्छन् । गर्भ खेर जाने सम्भावना रहेमा पा-ठेघरको मुख सामान्यतया खुला रहन्छ र भ्रू-ण धेरै समय जीवित रहन सक्दैन । यदि पहिले नै गर्भ खेर गइसकेको छ भने पा-ठेघरको मुख खुला अथवा बन्द हुन सक्छ ।
गर्भा-शयबाट सम्पूर्ण भ्रू-ण र सा-ल-नाल निस्किसकेको छ कि छैन भन्ने कुरामा यो निर्भर रहन्छ । रगतको परीक्षण गरी भ्रू-ण अथवा सा-ल-नाल गर्भमा रहेनरहेको बारे थाहा पाउन सकिन्छ । यदि महिलामा हा-र्मोनको कमी छ भने गर्भ खेर जान सक्छ । अल्ट्रा साउन्ड परीक्षण गरी हरेक अवस्थामा भ्रू-ण छ/छैन भनी परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसबाट भ्रू-णको मुटुमा ढुकढुकी छ कि अथवा भ्रू-णको मृ- त्यु भइसकेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
गर्भ खेर जानबाट बच्न कठिन काम नगर्ने, शरीरलाई आराम दिने, लामो यात्रा नगर्ने, शरीरलाई सजिलो हुने जुत्ता–चप्पल र कपडा लगाउन आवश्यक छ । यसले शरीरलाई द-बाब पर्दैन र गर्भ सुरक्षित रहन सक्छ । गर्भ रहेको अवस्थामा आहारविहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रदू-षणयुक्त स्थानमा नबस्ने, घरवरिपरि स्वच्छ राख्ने, जङ्कफुड र होटल रेस्टुरेन्टका खानाभन्दा घरमा बनाइएको स्वस्थकर खानामा बढी जोड दिनुपर्छ । गर्भ रहेको अवस्थामा शरीरमा आइरनको कमी हुने भएकाले आइरन चक्की, फोलिक एसिड र बी कम्प्लेक्सको सेवन गर्नु आवश्यक छ ।
गर्भ खेर जानुका लक्षण:- गर्भ खेर जानुका धेरै लक्षण छन् । यस्ता लक्षण हरेक महिलामा देखिनै पर्छ भन्ने चाहिँ कुनै जरुरी छैन । गर्भ खेर जाँदा भे-जाइनल डिस्चार्ज अर्थात् यो.., बाट गाढा रा-तो रङको र-गत आउन थाल्छ । यो धेरै दिनसम्म आइरहन सक्छ तर कतिपय अवस्थामा गर्भ रहे पनि हल्का रक्त-स्रा-व हुनु सामान्य नै मानिन्छ । तथापि, सुरक्षित गर्भावस्थाका लागि यस्ता लक्षण देखिएमा डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।
गर्भ रहिसकेपछि महिलालाई मासिक धर्मको अवस्थामा भन्दा पनि बढी पीडा भएमा गर्भ खेर गएको हुन सक्छ । गर्भावस्थाको समयमा पेटको तल्लो भागमा बढी पी-डा भएमा यसले भ्रू-ण निष्कासित हुने सम्भावना रहेको संकेत गर्छ । कहिलेकाहिँ ऐं-ठन अथवा पीडाका कारण सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यो पनि गर्भ खेर जानुको लक्षण हो ।
गर्भ रहेको सुरुवाती अवस्था हल्का पीडा भएजस्तो महसूस त हुन्छ तर, सहनै नसक्ने गरी पी-डा भयो भने गर्भ खेर गएको हुन सक्छ । गर्भ खेर जाँदा पीडा प्र-सव अवस्थाको जस्तै पाँचदेखि बीस मिनेटसम्म हुन सक्छ । यस्तो पीडा भएमा यसलाई बेवास्ता नगरी डाक्टरको परामर्श लिनु अत्यन्त जरुरी छ । यदि गर्भ रहेको अवस्थामा अचानक गर्भ-वती महिलाको तौल घट्न लाग्यो भने सचेत हुनु आवश्यक छ । यो गर्भ खेर गएको लक्षण हुन सक्छ । बच्चा नचलेको शंका लागेमा गर्भ खेर गएको हुन सक्छ ।
गर्भ खेर गएमा के गर्ने:- यदि गर्भ खेर गएको लक्षण पहिलो अथवा दोस्रो त्रै-मासमा देखिएमा डाक्टरले बेड रेस्टको सल्लाह दिन सक्छन् । गर्भ खेर गएको छ भने शरीर पूर्ण स्वस्थ नभएसम्म कडा व्यायाम र स-म्भो-गबाट बच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यो गर्भ खेर जान रोक्ने उपाय नभए पनि पुनः गर्भ रहेको अवस्थामा खेर जाने ख-तरालाई भने यसले टा-र्न सक्छ । यदि गर्भ खेर जाने क्रिया अधुरो छ भने स्त्रीरोग विशेषज्ञले डिल्टे-सन र कु-रेटेग नामक शल्यक्रिया गरी भू्रणको बचेको भाग गर्भा-शय-बाट हटाउँछन् ।
यदि गर्भ रहेको दोस्रो तीन महिनामा गर्भ खेर गएको छ भने डाक्टरले अस्पतालमा भर्ना गरेर नै भ्रू-ण र सा-ल-नालको बाँकी अंश निकाल्छन् । यदि गर्भ खेर गई भ्रू-ण बाहिर निस्किसकेको छ भने यसको परीक्षणका लागि प्ला-स्टिकको बट्टामा राखेर डाक्टरलाई दिन सकिन्छ । डाक्टरले माइक्रोस्कोपको प्रयोग गरी गर्भ खेर जानुको कारण पत्ता लगाउन सक्छन् ।